Ahene Nhoma a Edi Kan 10:1-29
Saba hemmaa bɛsraa Solomon (1-13)
Solomon nyaa ahonyade bebree (14-29)
10 Afei Saba hemmaa tee sɛnea Yehowa ama Solomon agye din.+ Enti ɔbae sɛ ɔde nsɛmmisa a ɛkyere adwene* rebɛsɔ no ahwɛ.+ 2 Ɔde dɔm kɛse*+ ne yoma a wɔsoso balsam ngo+ ne sika kɔkɔɔ pii ne aboɔden abo baa Yerusalem. Ɔbaa Solomon nkyɛn, na ɔde biribiara a ɛda ne koma so too ɔhene anim. 3 Ɛnna Solomon nso buaa ne nsɛm no nyinaa; biribiara nni hɔ a ɛkyeree ɔhene so a wantumi ankyerɛ mu. 4 Bere a Saba hemmaa huu Solomon nyansa nyinaa,+ ofi a wasi,+ 5 nnuan a ɛwɔ ne pon so,+ sɛnea n’ahemfi mpanyimfo tete ne nkyɛn, n’asomfo a wɔsom wɔ pon ho ne wɔn ntaade, nsahyɛfo, ne ɔhyew afɔre a daa ɔbɔ wɔ Yehowa fi no, ɔhemmaa no ho dwiriw no papaapa.* 6 Enti ɔka kyerɛɛ ɔhene sɛ: “Wo nyansa ne nea woayɛ ho nsɛm* a metee wɔ m’asaase so nyinaa yɛ nokware. 7 Mannye wɔn nsɛm no anni kosii sɛ m’ankasa mede m’aniwa behui; nea wɔka kyerɛɛ me no, anokwa, ennu wo nyansa ne w’ahonyade no fã mpo! Nea mabehu yi boro nea metee no so koraa. 8 Anigye ne wo nkurɔfo, na anigye ne wo nkoa a wogyina w’anim daa tie wo nyansa no!+ 9 Ayeyi nka Yehowa wo Nyankopɔn;+ ɔno na ayɛ no fɛ sɛ ɔde wo bɛtena Israel agua so. Yehowa dɔ Israel kosi daa, enti na wasi wo hene sɛ hwɛ ma atɛntrenee ne trenee nkɔ so no.” 10 Ɛnna ɔmaa ɔhene sika kɔkɔɔ dwetikɛse* 120, balsam ngo+ pii, ne aboɔden abo.+ Balsam ngo dodow a Saba hemmaa de maa Ɔhene Solomon no, obiara amfa bi amma saa bio. 11 Hiram ahyɛn a ɛde sika kɔkɔɔ fi Ofir bae no,+ na ɛde algum nnua+ pii ne aboɔden abo+ nso fi Ofir ba. 12 Ɔhene de algum nnua yɛɛ nnyinaso wɔ Yehowa fi ne ahemfi* hɔ, na ɔde bi nso yɛɛ asanku ne asankuten maa nnwontofo no.+ Ebesi nnɛ, algum nnua a ɛte saa bi mmae da, na wonhuu ɛso bi bio. 13 Ɔhene Solomon nso de nea Saba hemmaa pɛ ne nea obisae nyinaa maa no; ɛsono nea Ɔhene Solomon ankasa yii ne yam de maa no.* Afei ɔhemmaa no san n’akyi kɔɔ n’asaase so, ɔne ne nkoa.+ 14 Afe biara, sika kɔkɔɔ a na Solomon nya no, emu duru yɛ dwetikɛse 666;+ 15 ɛsono nea na akwantufo de ba, ne mfaso a na aguadifo no, Arabia ahemfo nyinaa, ne asaase no so amradofo de ba. 16 Ɔhene Solomon de sika kɔkɔɔ a wɔde dade afra yɛɛ akyɛm akɛse 200+ (ɔde sika kɔkɔɔ a emu duru yɛ nnwetɛbona* 600 guu akyɛm no biara ho),+ 17 na ɔde sika kɔkɔɔ a wɔde dade afra yɛɛ akyɛm nketewa* 300 (ɔde sika kɔkɔɔ mmɛnnaa* abiɛsa guu saa akyɛm no biara ho). Afei ɔhene de guu Lebanon Kwaefi hɔ.+ 18 Ɔhene yɛɛ asonse* ahengua kɛse bi+ nso, na ɔde sika kɔkɔɔ amapa faa ho nyinaa.+ 19 Stɛps a ɛtoatoa so asia na na wɔforo kɔ ahengua no anim; wɔyɛɛ biribi te sɛ apata kurukuruwa wɔ ahengua no soro. Ná ahengua no wɔ nsa wɔ ha ne ha, na na wɔayɛ agyata+ abien gyinagyina nsa no ho. 20 Agyata 12 gyinagyina stɛps a ɛtoatoa so asia no so; stɛps biara, abien na egyina so. Baako wɔ ano ha, ɛnna baako nso wɔ ano ha. Ná wɔnyɛɛ bi saa da wɔ ahenni biara mu. 21 Nea Ɔhene Solomon nom mu nyinaa, wɔde sika kɔkɔɔ na ɛyɛe, na Lebanon Kwaefi+ hɔ nneɛma nyinaa, wɔde sika kɔkɔɔ amapa na ɛyɛe. Wɔamfa dwetɛ anyɛ emu biara, efisɛ na dwetɛ nka hwee wɔ Solomon bere so.+ 22 Nea ɛte ne sɛ, na ɔhene wɔ Tarsis+ ahyɛn pii wɔ po so a ɛne Hiram ahyɛn kɔ kwan so. Mfe abiɛsa biara, na Tarsis ahyɛn no de sika kɔkɔɔ ne dwetɛ, asonse,+ nkontromfi, ne piikɔk* ba. 23 Enti sɛ yɛreka ahonyade ne nyansa a, na asaase so hene biara nto Ɔhene Solomon.+ 24 Nnipa fi asaase so baabiara baa Solomon anim betiee nyansa a Onyankopɔn de ahyɛ ne komam no.+ 25 Afe biara, na nkurɔfo de akyɛde brɛ no; dwetɛ ne sika kɔkɔɔ nneɛma, ntaade, akode, balsam ngo, apɔnkɔ, ne mfurumpɔnkɔ. 26 Solomon boaboaa nteaseɛnam ne apɔnkɔ* ano, na onyaa nteaseɛnam 1,400 ne apɔnkɔ* 12,000,+ na ɔde kɔɔ nteaseɛnam nkurow mu, na na ɛhɔ bɛn ɔhene wɔ Yerusalem.+ 27 Ɔhene maa dwetɛ dɔɔso wɔ Yerusalem sɛ abo, na ɔmaa sida nnua dɔɔso sɛ sikamɔɔ nnua a ɛwɔ Sefela.+ 28 Solomon apɔnkɔ no, wɔkra fii Egypt; ná ɔhene aguadifo no kɔtɔ apɔnkɔ* no akuwakuw tua bo a wɔatwa ato so.+ 29 Nteaseɛnam a wɔkra fii Egypt no, na ebiara bo yɛ nnwetɛbona 600, na ɔpɔnkɔ nso bo yɛ nnwetɛbona 150. Ná wɔn nso kɔtɔn ma Hitifo+ ahemfo ne Siria ahemfo.
^ Anaa “aborɔme; akasabebu.”
^ Anaa “ne wo nsɛm.”
^ Nt., “nea ɛwɔ Ɔhene Solomon nsam a ɔde maa no.”
^ Hebri Kyerɛwnsɛm mu no, bɛnnaa baako yɛ gram 570. Hwɛ Nkh. B14.
^ Ebetumi nso akyerɛ, “wɔkra fii Egypt ne Kue; ná ɔhene aguadifo no tɔ fi Kue,” na ebetumi aba sɛ Kue no ara ne Kilikia.